I-China isibe ngumkhiqizi nomthumeli omkhulu kunabo bonke bemikhiqizo elwa nobhubhane njengamaski nezingubo zokuvikela | Ukuqamba kabusha
I-China isibe ngumkhiqizi nomthengisi omkhulu kunabo bonke bemikhiqizo elwa nobhubhane njengamaski nezingubo zokuvikela
Ngenxa yokulawulwa ngempumelelo kwe-coVID-19 ekhaya kanye nokwanda okukhulu kwamandla wokukhiqiza afanelekile, iChina ibe ngumkhiqizi omkhulu kakhulu futhi othumela izinto kwamanye amazwe ezimaski, amasudi okuvikela neminye imikhiqizo yokuvikela ubhadane, isiza amazwe amaningi emhlabeni ukulwa nalolu bhubhane. Ngaphandle kweChina, ngokwemibiko eshicilelwe yezintatheli zeGlobal Times, awekho amazwe noma izifunda eziningi eziqhubeka nokuthumela izinto zokwelashwa emazweni angaphandle.
I-New York Times muva nje ibike ukuthi ukukhiqizwa kwamaski kwansuku zonke kweChina kukhuphuke kusuka ezigidini eziyishumi ekuqaleni kukaFebhuwari kuya ezigidini eziyi-116 emasontweni amane nje kamuva. Ngokombiko weGeneral Administration of Customs of The People's Republic of China, kusuka ngoMashi 1 kuya ku-Ephreli 4, cishe buso abayizigidi eziyizinkulungwane eziyi-3.86, amasudi okuvikela ayizigidi ezingama-37.52, imitshina yokushisa yeso lefoni eyi-2.41, ama-ventilator ayi-16,000, amacala wezigidi ezingama-2.84 wenoveli yeCoronavirus ama-reagent reagent kanye nezibuko eziyizigidi ezingama-8.41 zamagogolo zithunyelwa ezweni lonke. Iziphathimandla zoMnyango Wezohwebo Wangaphandle we-Ministry of Commerce ziveze nokuthi kusukela ngo-Ephreli 4, amazwe kanye nezifunda ezingama-54 nezinhlangano ezintathu zamazwe omhlaba bezisayine izinkontileka zokuthengwa kwempahla yezokwelapha namabhizinisi aseChina, kanti amanye amazwe angama-74 nezinhlangano zamazwe ayi-10 beziqhuba ezentengiselwano izingxoxo zokuthengwa kwempahla namabhizinisi amaShayina.
Ngokuphikisana nokuvulwa kweChina ekuthumeleni izinto zokwelashwa kwamanye amazwe, amazwe amaningi ngokwengeziwe abeka imikhawulo ekuthekelweni kwamaski, imishini yokuphefumula nezinye izinto. Embikweni okhishwe ekupheleni kukaMashi, iGlobal Trade Alert Group e-University of St. Gallen eSwitzerland ithe amazwe nezindawo ezingama-75 zibeke imigoqo yokuthekelisa ukuthekelisa ngezinto zokwelashwa. Kulo mongo, akuwona amazwe amaningi noma izifunda ezithumela izinto zokwelashwa ezithumela kwamanye amazwe. Ngokwemibiko yabezindaba, i-3M yase-US isanda kuthumela izifihla-buso emazweni aseCanada naseLatin America, kanti iNew Zealand nayo yathumela izindiza eTaiwan ziyothwala imishanguzo. Ngaphezu kwalokho, amanye amaski kanye namakhithi okuhlola nawo athunyelwa evela eSouth Korea, eSingapore nakwamanye amazwe.
U-Lin Xiansheng, oyinhloko yomkhiqizi wemikhiqizo yezokwelapha ezinze esifundazweni saseZhejiang, utshele i-Global Times ngoMsombuluko ukuthi isabelo esithunyelwa ngaphandle e-China samaski namasudi okuvikela siyakhula emhlabeni jikelele, kube nokwanda okuncane nje ekuthekelweni kwemishini yokuphefumula neminye imikhiqizo. "Izimpahla eziningi zokwelashwa zezinkampani zamazwe omhlaba zibhalwe izimpawu zokuhweba zakwamanye amazwe, kodwa umkhiqizo wangempela useChina." UMnu Lin uthe ngokwesimo samanje sokuphakelwa kanye nesidingo emakethe yamazwe omhlaba, iChina ingamandla amakhulu emkhakheni wezimpahla ezithunyelwa ngaphandle.